သက်ဝေ: မြန်မာ Department
AMA THET WAI,
SO HAPPY DEPARTMENT. I Think all of ur group are handsome and pretty cos u all are happy and good minded (u mentioned).
Mae June 25, 2009 at 6:13 PM
ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာ၊ အရမ်း အားကျသွားပါတယ်၊ ဒီလိုမျိုး အလုပ်မှာနေရတာ ရှေးကုသိုလ်ကောင်းလို့ နေမှာနော်၊
sonata-cantata June 25, 2009 at 6:20 PM
အားကျစရာ၊ ကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာပါ သက်ဝေ...
ကံတူ အကျိုးပေးတွေ ထင်ပါရဲ့...တို့များတော့ အိမ်မှာတောင် တယောက် တဒေါင့်ဆီမှာ နေ,နေကြတာ...(စောစောစီးစီး ပျော်စရာမကောင်းတာကို လာမန့်ရတဲ့ အတွက် ခွင့်လွှတ်ပါ။)
P.Ti June 25, 2009 at 7:01 PM
ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာ... အလုပ်လုပ်ရတာ အဲလိုမျိုးဆို ပင်ပန်းတယ်လို့ရှိတော့မှာလဲနော်...
အဲဒီလို အစဉ်အလာကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်လေ ကောင်းလေပါပဲ...
khin oo may June 25, 2009 at 7:48 PM
ပုံပြင်လားလို့နားထောင်နေတာ.ပြီးမှ reality show ဆိုတာ ကို သိလိုက်ရတယ။်
ထမင်းမစားရင်ဘာစားသလဲ သိ့ပရစေ။
နေ့တနေ့မှာ.. အများဆုံး အချိန်ပေးရတဲ့ လုပ်ငန်းခွင် က..အဲဒီလို နွေးထွေး ငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတာ.. ကံ ကောင်းတာပါပဲ။
ဒါဆို- မသက်ဝေက..နေ့လည် ထမင်းမစားပဲ..ဘာတွေ စားလဲ.. မျက်နှာဘုတ်အုပ်ထဲမှာ..ဘာတွေ ၀ယ်စားနေလဲ..း)
စကားမစပ်- ကျေးဇူး အထူး နဲ့..၀မ်းသာ အထူးး)
ထမင်းမကြိုက်တာလား ၀ိတ်လျှော့တာလား ခွဲခွဲခြားခြား ပြောပါ..ခင်ရယ် အဲလေ ဝေရယ်။ စင်ကာပူတုန်းက departmentထဲမှာ မြန်မာနှစ်ယောက်ပဲ။ ခင်လဲခင်တယ်။ ဇက်တီရဲ့ အမျိုးပေါ့ကွယ်။ ဖတ်မိရင် ပြန်ပြောလိုက်နော် ထမင်းအလကားကျွေးပါစေ။
အပြုံးပန်း June 25, 2009 at 9:45 PM
ဖတ်ရင်းနဲ့ ကြည်နူးမိတယ်၊ မသက်ဝေက အကြီးဆိုတော့ စံပြအဖြစ် နေပြလို့နေမှာပေါ့။
အများစိတ်ဝင်စားသလိုပဲ နေ့လည်စာ ဘာစားလဲမသိဘူး။
tg.nwai June 25, 2009 at 10:39 PM
အဲဒီလိုလေးတွေကြားရတာ စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာ သက်ဝေရယ်.. အကုန်လုံးက စိတ်တူကိုယ်တူ လာစုနေကြတာကိုက ရှေးရေစက်ကြောင့်နေမှာပဲ.. အလုပ်ခွင်ကလည်းပျော်စရာကြီးပဲ။ မြန်မာတွေ သုံးယောက်ရှိရင်မတည့်ဘူးလို့ ကြားကြားနေရတော့..စိတ်မချမ်းသာလှဘူးလေ..။
သက်ဝေတို့ မြန်မာDepartment က ညီအကိုမောင်နှမတွေ အားလုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေနော်..
ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ June 25, 2009 at 11:25 PM
Moe Cho Thinn June 25, 2009 at 11:54 PM
အလုပ်ဆိုတာ second home မို့ အလုပ်မှာ ပျော်ရွှင်မှ စိတ်ချမ်းသာရမှာပါ။ အဓိကက တယောက်နဲ့တယောက် ကူညီပြီး မတွက်ကပ်မှ၊ အကောင်းမြင်တဲ့ စိတ်မျိုး များမှ ဒီလို ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေမျိုး ရတတ်တာ။
တချို့ကျတော့လဲ သူများကို အလိုလိုနေရင်း အလိုမကျ စိတ်တိုနေတာမျိုး ရှိတတ်သေးတယ်။ အဲဒါဆိုရင် ချိုသင်းတော့ ပြောလိုက်တာပါပဲ။ မပင်ပန်းဘူးလား အမရယ် လို့။ သူများကို ဒေါသထွက်နေတာ ကိုယ်ပဲ ပင်ပန်းတာပေါ့။
ချိုသင်းလဲ ပျော်တဲ့အခါလဲရှိ၊ မပျော်တာလဲရှိ။ ဒါပေမဲ့ ဒီအလုပ်မှာ ၁၂ နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီ။
ပုံရိပ် / Pon Yate June 26, 2009 at 8:51 AM
ပျော်စရာကြီးပါလား။ အဲလိုမျိုး နေရာမှာ လုပ်ချင်သား အစ်မရေ။
rose of sharon June 26, 2009 at 10:04 AM
စုချစ် June 26, 2009 at 10:12 AM
သူများတို့ရုံးကအခန်းထဲမှာတော့ မြန်မာအစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်...။ အေးလိုက်တာမှ တနေ့နေလို့ စကားတခွန်းမပြောဘူးတော့။
ရုံးရောက်တာနဲ့ နားကြပ်ပိတ်ပြီးထိုင်ခုံမှာ ထိုင်အလုပ်လုပ်လိုက်တာ ရုံဆင်းထိ... ရုံးကိတ်စ အစည်းအဝေးကလွဲ... စကားပြောစရာမရှိ..။
သူများကလည်း စကားကခပ်များများဆိုတော့.... တရုတ်တွေနဲ့ ပြောရတာ အားမရရင် ... ပျင်းလာပြီဆိုရင် ဘယ်ရမလဲ တခြား department မြန်မာရှိတဲ့နေရာထိသွားပြီး မြန်မာလို သွားသွားပြောပြီး အာသာဖြေ... အတင်းလေး ဘာလေးတုတ်ရတယ်..အဟိ
Hmoo June 26, 2009 at 11:02 AM
I get happy and fresh4ur little Burma...
PAUK June 26, 2009 at 11:02 AM
BlueBerry June 26, 2009 at 11:39 AM
ကျွန်မ အလုပ်က မြန်မာမရှိတဲ့နေရာပါ...ကျွန်မကိုကြည့်ပြီးမှ မြန်မာကိုဆက်ခန့်တာပါ... ကျွန်မက အများကြီး ရုန်းကန်ရှင်သန်ရပါတယ်.......
တိုက်ဆိုင်တာလားဟင်...ကျွန်မပြောင်းတဲ့ Companyတိုင်း မြန်မာမရှိ...၀မ်းနည်းလိုက်တာ......
နွေးနေခြည် June 26, 2009 at 1:47 PM
အမအလုပ်က ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာ... အဲလိုမျိုးအလုပ်လုပ်ချင်တယ်။
ညီမအခုအလုပ်လည်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်.. ဒါပေမယ့် မြန်မာက ကိုယ်တယောက်တည်း (အားငယ်တာ...အဟင့်)
ပန်းခရမ်းပြာ June 26, 2009 at 4:16 PM
ပထမဆုံး လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ အလုပ်မှာလည်း ဗမာ လေးယောက် ရှိတယ်။ မသက်ဝေ တို့လိုပဲ၊ အရမ်းစည်းလုံးပြီး ပျော်စရာ၊ Good Friday များစွာနဲ့ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ နောက်ထပ်အလုပ်တွေ ပြောင်းတဲ့ အခါမှာတော့ ပျော်စရာတွေ ရှိသလို စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေနဲ့လည်း ကြုံရတယ်လေ။ မသက်ဝေတို့ရဲ့ မြန်မာ Department လေးကိုတော့ အရမ်း အားကျမိပါတယ်။
မေဇင် June 26, 2009 at 4:52 PM
အစ်မ ရေ...စိတ်ချမ်းသာ စရာကြီးနော်...နောင့် တို့ ရုံးမှာ..ရုံးပိုင်းမှာ နောင့်တစ်ယောက်ထဲမို့..အပြိုင်အဆိုင်တွေ ဘာတွေ မရှိ မသိရပါဘူး..ဒါပေမယ့် မြန်မာတွေ များမယ်ဆိုလဲ ..အစ်မတို့ ဌာန လိုမျိုး ပျော်စရာ ကောင်းအောင် နေဖြစ်မယ် ထင်တယ်..အားကျလိုက်တာ အစ်မရယ်..ခုတော့ နောင့် တစ်ယောက်ထဲ..။
Rita June 26, 2009 at 8:10 PM
မြန်မာ ၄ ယောက်ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ၂ ယောက်က fabricate လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဆိုတော့ ရုံးမှာက စီနီယာနဲ့ ကျွန်မ ၂ ယောက်တည်း။ စီနီယာက စိတ်သဘောကောင်း မသိတာ မတတ်တာ အားလုံး မညီးမညူ သင်ပေး ဆိုပေမယ့် လူအင်အားနည်းတော့ ပျင်းခြောက်ခြောက်မို့ မမတို့ ရုံးကို ပြောင်းခဲ့ချင်လိုက်တာ။ နန်းကြီးသုတ်ကလည်း ကြိုက်သေး...
May Moe June 26, 2009 at 8:53 PM
အမ အကောင့်တန့် အလုပ်လိုရင်ပြောပါ ။ ပျော်စရာကြီး
Nu Thwe June 27, 2009 at 7:59 AM
အဲဒီမှာ “အစည်းလုံးဆုံး မြန်မာ လုပ်ငန်းခွင်မိတ်ဆွေများဆု” ဆိုပြီး စထွင်ကြည့်ပါလား။ ဒါဆို မသက်ဝေတို့လည်း ပွဲဦးထွက် ဆုရ၊ သူများတွေလည်း အားကျပြီး ပြောင်းလဲလာ၊ ဘယ်လောက် ကောင်းလဲ။ ဘက်မလိုက်မယ့် ဒိုင်အဖွဲ့တော့ လိုလိမ့်မယ်။
သီဟသစ် June 28, 2009 at 12:45 AM
ဖတ်ရတာ စိတ်ချမ်းသာစရာနော် ကျွန်တော်တို့ ရုံးလည်း မြန်မာ ၃ ယောက်ရှိလာပြီ
Soke Phwar June 28, 2009 at 9:32 AM
Hi..can I get bodyguard job in your Burmese department?
ဘာတွေတုန်း July 11, 2009 at 3:39 PM